Fampihavanana Iraisampirenena Tamin’ny Alalan’ny Famotsorana Ireo Iraniana-Amerikana, Ankehitriny Ilaina Ny Fampihavanam-Pirenena Sy Ny Famotsorana Iraniana Gadra Politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2016 4:01 GMT
Gadra Iraniana-Amerikana efatra navotsotra tamin'ny faran'ny herinandro noho ny fifanarahana tamin'ny governemantan'i Etazonia. Sary avy amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Hanandratana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary navoaka eto indray ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Hanandratana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Noarahabain'ny Fanentanana Iraisampirenena Hanandratana ny Zon'Olombelona ao Iran ny famotsorana niandrasana ela dia ela ireo Iraniana-Amerikana efatra, ahitana an'i Jason Rezaian, mpanangom-baovaon'ny Washington Post nosamborina tao Tehran ary nigadra nandritra ny 18 volana farany tamin'ny fitsarana sandoka sy tafiditra resaka politika.
“Raha mariky ny fanirian'i Iran hihavana amin'ny iraisampirenena izao famotsorana izao, dia tsy maintsy irosoana ihany koa ny fampihavanam-pirenena,” hoy i Hadi Ghaemi, tale mpanatanteraky ny Fanentanana Iraisampirenena Hanandratana ny Zon'Olombelona ao Iran, “ary izany dia midika famotsorana ireo gadra politika maro dia maro mbola mifonja ao Iran.”
Tamin'ny fanambarana ny famotsorana ny Mpampanoa Lalànan'i Iran no nametraka fa ny takalo dia natao noho ny “tombontsoam-pirenena.”
“Efa betsaka izany fampihavanam-pirenena izany ao amin'ny ‘tombontsoam-pirenena’,” hoy i Ghaemi. “Maro tamin'ireo tao Iran no efa ela niantsoana ny hanaovana ny fampihavanam-pirenena amin'ny alalan'ny famotsorana ny gadra politika, mpitarika ny Hetsika Maitso, ary ireo notazonina am-ponja hatramin'ny nisian'ilay fihetsiketsehana milamina nanaraka ny fifidianana nifandirana tamin'ny 2009 tao Iran.”
NIantso ny hamotsorana mpigadra tahaka izany ny Fanentanana, tafiditra amin'izany i Omid Kokabee ilay Farmasiana, i Bahareh Hedayat mpikatroky ny zon'ny vehivavy, Issa Saharkhiz mpanao gazety , Narges Mohammadi mpikatroky ny zon'olombelona, Abdolfattah Soltani sy Mohammad Seifzadeh mpisolovavan'ny zon'olombelona, ry Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi, ary Zahra Rahnavard mpitarika ny Hetsika Maitso, ary ireo maro hafa izay mbola tsy mifarana ny fisedrana mahazo azy ireo.
“Tsy misitraka fijerena manokana tahaka izany ireo Iraniana gadra politika izay nogadraina tamin'ny vesatra tsy mitombina tahaka izany ihany koa fa tsy mitazona pasipaoro vahiny,” hoy i Ghaemi. “Mbola fanohizana ny fanovana endrika ny fitsarana [rariny] izany,” hoy izy nanampy teny.
Nitatitra ihany koa ny fampitam-baovao iraniana fa Iraniana fito voatazona any Etazonia noho ny fanitsakitsakana ny fanasaziana no navotsotr'i Etazonia: Nader Modanlou, Bahram Mechanic, Khosrow Afqahi, Arash Ghahreman, Touraj Faridi, Nima Golestaneh, ary i Ali Sabounchi.
Nohamafisin'ny sampan-draharaham-pilazam-baovao ofisialy Iraniana ny anaran'ireo Iraniana-Amerikana telo hafa mizaka zom-pirenena roa miaraka amin'i Rezaian: Saeed Abedini, Amir Mirzaei Hekmati, ary Nosratollah Khosravi.
Navotsotr'i Iran ihany koa ilay Amerikana mpianatra Matthew Trevithick, izay tsy navoaka ny anarany tamin'ny voalohany satria tsy tian'ny fianakaviana halaza ny fisamborana azy.
Mbola misy ihany anefa ireo mizaka zom-pirenena roa na vahiny tavela any am-ponjan'i Iran. Ao anatin'izany: Siamak Namazi, Iraniana-Amerikana nosamborina tamin'ny Septambra 2015, Kamal Foroughi, ilay Iraniana-Britanika 76 taona notazonina nanomboka tamin'ny 2013, ary ilay Libaney Nazar Zaka izay nonina tany Etazonia ary nosamborina rehefa nanatrka valandresaka iray tao Tehran tamin'ny Septambra 2015.